Intsha ye-Samsung Tab S7 FE kunye ne-Tab A7 lite iyeza.
Ukusuka kwiindaba ezixeliweyo, i-Samsung galaxy tab entsha ye-S7 FE kunye ne-Galaxy tab ye-A7 Lite iyeza ngoJuni ka-2021. Yakhelwe ngomboniso omkhulu we-intshi eyi-12.4, ilungele ukuthatha ulonwabo, imveliso, ...
I-Samsung Tab S7 kunye neVS Pro Pro 2020
Kuba ipad pro ithathwa njengeyona tablet ibalaseleyo ngokuthe ngqo. Ngoku i-Samsung yenze i-Tab S7 kunye nokwenza njengeyona tablet ibhetele ye-Android entle kakhulu kuqala. Masizithelekise kwiimpawu. Kuqala, i-Tab S7 kunye nokudibanisa itshaja ekhawulezayo. Inenkxaso yamashumi amane ...
Yintoni umahluko phakathi kweblubhodi yezitshixo kunye nekhibhodi engenazingcingo?
1. Umahluko 1: Iindlela zonxibelelwano ezahlukeneyo. Ibhodi yezitshixo ye-Bluetooth: ukuhanjiswa okungenacingo nge-Bluetooth protocol, unxibelelwano ngeBluetooth ngaphakathi kuluhlu olusebenzayo (ngaphakathi kwe-10m). Ikhibhodi engenazingcingo: Thumela ulwazi kwigalelo kwisamkeli esikhethekileyo ngokusebenzisa amaza omoya okanye amaza erediyo. 2. Umahluko ...
Yeyiphi ifomu efanelekileyo kwi-iPad yakho entsha ye-11 12.9 intshi 2021?
ngomphathi ku 21-05-15
I-2021 ipad pro 11 kunye ne-intshi eyi-12.9 intshi ziyafumaneka ukuthenga kwisiqingatha sikaMeyi. U-Apple uthe: Elona thuba liphezulu le-iPad. Ngoku ngokuphefumla kwemvume ye-M1, umboniso weXDR ophefumlayo, kunye ne-5G ekhawulezayo evuthayo. Kholwa ukuba ukhutshiwe ukuze uyifumane. Ngaba uzilungiselele zonke ipad yakho entsha ...
Ityala elitsha loyilo lomfundi weBOOX Nova
Ityala elitsha le-BOOX nova 3 umbala wokufunda imibala Abantu abaninzi bayathanda ukufunda i-ebook kwi-ereader. Kukulungele ukufunda uninzi lweencwadi kwesi sincinci se-ereader. Ungakhathazeki ukuphatha iincwadi ezinzima kakhulu, ezithatha indawo kunye nemali. Ngoku i-BOOX ereader yenye yezona zifundi zithandwa kakhulu. Ndi ...
Ukukhutshwa kweMveliso eNtsha ye-Samsung galaxy tab ye-A7 Lite 8.7 intshi
Ukusuka kwiindaba zangaphandle ezityhiliweyo, i-Samsung galaxy tab ye-A7 Lite 8.7 intshi iya kukhupha kutshanje. Inombolo yemodeli SM-T225 SM-T220. Yi-intshi ye-8.7 ​​enomzimba omncinci we-ultra body. Ngesinxibelelanisi se-USB-C. Obo bungakanani bubungakanani obuthandwayo, kwaye kulula ukuba usebenze ngesandla esinye. Ngoku i-slim kunye ne-lightweight c ...
Olona khetho lufanelekileyo kwi-ipad yakho
Olona khetho lufanelekileyo kwi-ipad yakho xa ufumana iphedi entsha, kuya kufuneka ulungiselele ezinye izixhobo ekufuneka zibalulekile. Eyona nto ibaluleke kakhulu kwimeko yokhuseleko. I-ipad yakho ibiza kakhulu kangangokuba kufuneka uyikhusele njengobusi .Iya kudibana nawe imini nobusuku. Ke kufuneka simxabise kwaye simkhusele okanye ...
Ithebhulethi iya kuphakama kwixesha elizayo
Ngaba intengiso yeethebhulethi iya kukhula kulo nyaka mtsha? Ukusukela ubhubhane walo nyaka, zombini iofisi ehambayo kunye nokufundiswa kwabafundi kwi-Intanethi kuye kwathandwa kakhulu. Umda wendawo yokufunda eofisini ucinywe ngokuthe chu, kwaye imeko yokusebenza ayiphelelanga kwiofisi, ekhaya, cof ...
Yonke into eNtsha yoDibaniso oluHlangeneyo lwePhedi yekhibhodi ye-TPU yeTPU kule mihla, sikhupha ityala lethu elitsha kwibhodi yezitshixo zekhibhodi -Imagnethi ye-Magnetic TPU ikhibhodi yomoya we-ipad 4th Isizukulwane se-10.9 intshi ye-2020. Idibanisa i-trackpad echanekileyo kunye nebhodi yezitshixo epheleleyo ye-iPad yakho ...